Sainam-pirenen' i Zambia
I Zambia ao Afrika
Sarin-tanin' i Zambia
I Zambia dia firenena amin' ny tapany atsimon' i Afrika Atsinanana, izay mananana morontsiraka ao amin’ ny Ranomasimbe Indiana sady ahitana farihy maro koa, manana velaran-tany 752 614 km². I Lusaka no renivohiny.
Lembalemba avo no manjaka ao amin’ ny tanin’ i Zambia. I Zambeze no ony lehibe indrindra any, izay manasaraka an’ ity firenena ity amin’ i Zimbaboe ao atsimo.
Toetanin-jana-pehintany ny toetany any, fa toetany antonony kosa ny amin’ ny faritra avo. Iharan’ ny hain-tany matetika io firenena io. Hivoka anirian-kazo no mandrakotra ny mpahany be amin’ ny tanin’ i Zambia. Maro ireo tahirin-javaboary hita ao Zambia izay iarovana ireo biby an-dalam-paharipahana.
Ao afovoan’ i Zambia no tena ahitana ny ankamaroan’ ny mponina, izay mitsinjara amin’ ny vondrom-poko mihoatra ny fitopolo izay samy miteny banto avokoa, ka ny maro anisa dia ny Bemba sy ny Lôzy ary ny Tônga.
Miankina amin’ ny fitrandrahana varahina ny toekaren’ i Zambia. Ny ankamaroan’ ny mponina anefa misahana asa momba ny fambolena.
Zanatany britanika taloha i Zambia (izay natsoina hoe Northern Rhodesia tamin’ izany fotoana izany), izay nahazo ny fahaleovan-tenany tamin’ ny taona 1964. Ny fiteny anglisy no fiteny ôfisialy any.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Zambia&oldid=1040835"
Voaova farany tamin'ny 3 Desambra 2021 amin'ny 15:34 ity pejy ity.